ရွှေဖရုံသီး က ပေးသော ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
WhFoods ၏ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်များအရ၊ ရွှေဖရုံသီး ၁၀၀ ဂရမ်ထဲတွင် လူသားတို့ ကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ပရိုတင်း ၁.၃ ဂရမ်၊ သဘာဝအဆီဓာတ် ၀.၃ ဂရမ်၊ ကစီဓာတ် ၉.၉ ဂရမ်၊ ဗီတာမင်အေ ၂၆၉၀၈ IU ၊ ဗီတာမင်ဘီဝမ်း၊ ၀.၀၃ မီလီဂရမ်၊ ဗီတာမင်ဘီတူး ၀.၀၇ မီလီဂရမ်၊ နီအာစင် ၀.၄ မီလီဂရမ်၊ ဗီတာမင်စီ ၅ မီလီဂရမ်၊ ကယ်လ်စီယမ် ၃၂ မီလီဂရမ်၊ မီးစုန်း ၄၂ မီလီဂရမ်၊ နှင့် သံဓာတ် ၁.၇ မီလီဂရမ်တို့အသီးသီးပါရှိကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၁-ဂရမ် ပမာဏရှိသော ရွှေဖရုံစေ့ထဲရှိ ပရိုတင်းဓာတ်ပါဝင်မှုဟာ နွားနို့ ၁ ဖန်ခွက်စာ ပရိုတင်းဓာတ်ပမာနှင့် ထပ်တူ့ညီမျှတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါတင်မက သေးပါဘူး။ ရွှေဖရုံစေ့ဟာ ကျန်းမာရေးကိုကောင်းကျိုးပြုစေသည့် မပြည့်ဝဆီ၊ ဗီတာမင်ကေ နှင့် ဗီတာမင်အီးတို့စုဝေးရာအရင်း အမြစ်လဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
1. မျက်စေ့အဝေးမှုန်ခြင်း/အနီးမှုန်ခြင်း နှင့် ကြက်မျက်သင့်ရောဂါဝေဒနာရှင်များသည် ဗီတာမင်အေ အပြည့်အ၀ပါရှိသော ရွှေဖရုံသီးကို မဖြစ်မနေစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
2. ရွှေဖရုံသီးထဲမှာ ဆန့် ကျင်ဓာတ်တိုးပစ္စည်းများ၊ ဗီတာကယ်ရိုတင်း နှင့် ဗီတာမင်အီး တို့ ပါရှိသောကြောင့်၊ အသားအရေကို ကျန်းမာစေကာ၊ ၀ဲနှင်းခူရောဂါတို့ လို ကူးစက်ရောဂါများကိုလဲ မဖြစ်စေပါဘူး။
3. အရွယ်တင်နုပျိုစေလို့အလှအပမြတ်နိုးတဲ့ ပျိုပျိုမေတို့ အားထားလောက်ပါတယ်။
4. ရွှေဖရုံသီး နှင့် ရွှေဖရုံစေ့ထဲရှိအဆီတို့ သည် ကာမအားကို တိုးပွားစေသည့်အပြင်၊ ထိုသဘာဝအဆီဓာတ်က ကျောက်ကပ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်မြင့်မားလာစေပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိမလိုလားအပ်သော၊ အညစ်အကြေးတို့ ကို ဆီးအဖြစ်စွန့် ထုတ် ပေးနိုင်လို့ ဆီးကျောက်တည်ခြင်းမဖြစ်စေပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသားများတွင်ဖြစ်တတ်သော ဆီးကျိတ်ကြီးထွားလာခြင်းကို သက်သာစေရုံမျှမက၊ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရောဂါကိုလဲ ထိထိရောက်ရောက် တားဆီးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
5. အမျိုးသမီးများ၏ မျိုးပွားအင်္ဂါအဖွဲ့ အစည်းများကို အလွန်အမင်းကောင်းကျိုးပြုလို့ ၊ သားသမီးယူရန် အစီအစဉ်ရှိသော မိခင် လောင်းများ ရွှေဖရုံသီးနှင့် ရွှေဖရုံစေ့တို့့ကို အထူးတလည်စားပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် ရွှေဖရုံသီးဟင်းလျာကို စားပေးခြင်းခြင့် ရင်ခေါင်းတောင့်ခြင်း နှင့် ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ခြင်းကို သက်သာစေကာ ခံတွင်းလိုက်စေပါတယ်။ နောက်ပြီး အမျှင် ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါရှိလို့ကိုယ်ဝန်သည်များအတွက် အကောင်းဆုံး သဘာ၀၀မ်းပျော့ဆေးတစ်ခွက်ပါဘဲ။
6. ရွှေဖရုံသီး နှင့် ရွှေဖရုံစေ့တို့ သည် အရိုးကြီးထွားမှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေတဲ့အပြင်၊ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းနာတို့ ကိုလဲ သက် သာလာစေပါတယ်။
7. ရွှေဖရုံသီးထဲတွင် ဗီတာမင်စီ အလုံအလောက်ပါရှိတာကြောင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
8. ဗီတာမင်ဒီ ကြွယ်ဝစွာပါရှိသောကြောင့်၊ အာရုံကြောအဖွဲ့ အစည်းများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေပါတယ်။
9. အစေ့အထဲမှာ phytosterols ဓာတ်ပေါင်းစုပါရှိလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ မလိုလားအပ်သော LDLကိုလက်စထရော ပမာဏကို လျော့ချ ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
10. အစာချေစံနစ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည့်ပြင်၊ ၀မ်းချုပ်ခြင်းမှလဲ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
11. မျက်စေ့ကြောင်၍ နာတာရှည်အိပ်မပျော်သူများသည် မဂနီစီယမ် အလုံအလောက်ပါရှိသော ရွှေဖရုံသီးဖျော်ရည်ကို ပျားရည် အနည်းငယ်ရောစပ်ကာ သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ရွှေဖရုံစေ့ထဲမှာ L-tryptophan ပါရှိလို့၊ နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်မော ကျစေပါတယ်။ စိတ်ကျဝေဒနာသည်များကို ရွှေဖရုံစေ့ကျွေးပေးသင့်ပါတယ်။
12. အစာအိမ်နာ၊ ဖက်ခွက်နာ၊ ပြည်တည်နာနှင့် ကိုယ်တွင်းကိုယ်ပ အနာအမျိုးမျိုးတို့ ကို လဲ ကောင်းကျိုးပြုပါတယ်။
13. ရွှေဖရုံသီးထဲမှာ အချိုဓာတ်ပါရှိသော်လဲ၊ သွေးထဲရှိသကြားပမာဏကို ကျစေပါတယ်။
14. အာဟာရချို့ တဲ့သူများ ရွှေဖရုံသီးစားပေးခြင်းဖြင့် သိသိသာသာ အားပြန်လည်ပြည့်စေပါတယ်။
15. သရက်ရွက်ကို ကျန်းမာစေပါတယ်။
16. ချောင်းဆိုးရင်ကျပ်ခြင်း၊ လေပြွန်ပွခြင်း နှင့် လည်ချောင်းနာခြင်း တို့ ကို သက်သာစေပါတယ်။
17. ရွှေဖရုံသီးနှင့် အစေ့တို့ သည် ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ၊ တုပ်ကောင်၊ သန်ကောင်၊ ကပ်ပါးကောင် တို့ ပြန့် ပွားလာမှုကို ဟန့် တားပေး ပါတယ်။
18. ရွှေဖရုံစေ့အဆီထဲမှာ မဂနီစီယမ်၊ မဂနီးစ် နှင့် ဖော့စဖရက်စ် (ခေါ်) မီးစုန်းတို့ ကြွယ်ဝစွာ ပါရှိလို့အသည်းကို ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်စေနိုင်ပါတယ်။
19. ရွှေဖရုံစေ့အဆီထဲမှာ ဖက်တီးအက်ဆစ်ပါရှိလို့သွေးကြောမများနှင့် တစ်ရှုးများကို ကောင်းမွန်တိုးတက်စေပါတယ်။
20. The American Journal of Clinical Nutrition တွင် ဖော်ပြထားတာကတော့ အသက် ၄၅ မှ ၉၂ အရွယ် အမျိုးသားကြီး ၄၀၀ ကို သုတေသနပြုစမ်းစစ်ချက်အရ၊ ဇင့်ဓာတ်ချို့ တဲ့မှုကြောင့် ဦးခေါင်းခွံမှမြီးညှောင့်ရိုးထိ ကျောရိုးတလျှောက် အရိုးကြွပ် ဆတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့။ သို့ သော် ဇင့်ဓာတ်မြင့်မားစွာပါရှိတဲ့ ရွှေဖရံစေ့ကို စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် အရိုးကြွပ်ဆတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
(၁) ရွှေဖရုံစေ့ ဟာ ကျန်းမာရေးကိုကောင်းကျိုးပြုတာမှန်သော်လဲ၊ တစ်ကြိမ်တည်းတွင် လက်တစ်ဆုပ် စာပမာဏ ထက် ပိုမိုစားမိပါက၊ ဗိုက်အောင့်စေပြီး၊ အခန့် မသင့်ရင် ၀မ်းသွားတတ်ပါတယ်။
(၂) ရွှေဖရုံသီးကို ကြိုက်တိုင်းလဲ အလွန်အကျွံ မစားပါနဲ့ ။ သွေးတိုးစေပါတယ်။
တိုးတက်ခေတ်မီသော ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတအမြင်ကျယ်လာသည်နှင့်အမျှ ဘ၀တစ်သက်တာ ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်လိုပါလျှင်၊ သစ်သီးဝလံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို လစ်လှုရှုပစ်ပယ်၍မရကြောင်းကို ကျန်းမာရေးလိုက်စား သူလူသားတိုင်း သိရှိလာကြပြီဖြစ်ပါသည်။ ထို့ ကြောင့်လူသားတို့ ကျန်းမာရေးကို ကောင်းကျိုးပြုကာ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး မရှိ သော ရွှေဖရုံသီးနှင့် အစေ့တို့ ကို 'အစာလည်းဆေး၊ ဆေးလည်းအစာ" အဖြစ် စားသောက်ပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းလိုက်ရ ပါသည်။
Ref : encyclopedia" health benefits of pumpkin"
Credit to >>ပေါက်ပေါက်၏ ရွှေဖရုံသီးနဲ့ ကျန်းမာရေး။ ဆောင်းပါးမှကောကနူတ်ဖေါ်ပြပါသည်။